Macaamiisha Google One waxay soo qaadan karaan Guri Google Guri bilaash ah - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Macaamiisha Google One waxay soo qaadan karaan Google Home Mini bilaash ah
Had iyo jeer way fiican tahay in hadiyad la helo, wax alla wixii ay tahay. Haddii aad tahay taageere teknolojiyad ah, wax yar oo Google Home Mini ah oo la bixiyo ayaa had iyo jeer u wanaagsan gurigaaga ku xidhan. Tan darteed, waa inaad noqotaa rukumo Google One ah.
Haddii aad iska diiwaan geliso Google One, waa inaad hubisaa emaylkaaga sababta oo ah, sida laga soo xigtay warbixinno dhowr ah oo dhowaan soo baxay, waxay umuuqataa in Google go’aansatay inay u bandhigto isticmaaleyaasha adeeggan a Google Home Mini. Isticmaalayaasha qaar ayaa xaqiijinaya inay heleen emayl leh macluumaadka hadiyaddan. Haddii aadan raad ku lahayn e-maylkan, waxaa muuqata inay suurtogal tahay inaad si toos ah uga soo ceshato lambarka hadiyadda si toos ah boggaaga koontada Google. Hadiyad ah dhowr iyo toban euro, had iyo jeer waa mid fiican, taas oo waliba u oggolaanaysa qaar ka mid ah inay ogaadaan Google Home iyo kuwa kaleba inay ku habeeyaan nidaamkooda qalabaynta guriga.
Google waxay bixisaa Google Home Mini macaamiisha Google One
Kuwa aan aqoon, Google One waa nooc dheer oo Google Drive ah. Adeeggu waxaa lagu bilaabay 2018, waxaa lasiiyay gaar ahaan waqtiga xulashooyin dheeri ah, lacag bixin, kaydinta daruurta. Wadnaha adeegga, nidaam aad ugu eg Google Drive. Farqiga ugu weyn waa rukumada la siiyay ee adeegsadayaasha ubaahan kaydinta ka badan tan Google ay bilaash ku bixiso Drive. Waa tusaale ahaan suurtagal in laga faa'iideysto kaydinta 100 GB ee loogu talagalay 1,99 € bishii, ama 19,99 € sanadkiiba.
Hadiyad had iyo jeer way fiicantahay, taasi ma diido
Sheekada ma dhahdo waa maxay isku xirka u dhexeeya Google Home Mini iyo adeegga Google One laakiin waxay ku xukumaan emayllada, waxay u muuqataa in tani ay tahay habka Google ay u muujiso macaamiisheeda sida buur-buur weyn U arag mahadsanid rukumadooda Google One. Cidna ma ogaan karto muddada deeqdaas la heli doono iyo muddada intee le'eg ayay macaamiishoodu ku dalban doonaan dalabkooda Google Home Mini. Shaki ahaan, waxaa iska cad in lagu taliyo in si dhakhso leh loo sii wado. Xusuusnow, haddii shirkadda weyn ee Mareykanku ay runtii soo bandhigto aaladda, gaarsiinta, isla markaa, adiga ayaa mas'uul ka ah.
Google Chrome: Nidaamka qarsoon wali waa la baadhay
Coupon: Acer's Chromebook wuxuu ku iibiyay Amazon
Duulimaadyada Google waxay ku soo celin doonaan farqiga haddii aad meel kale ka rakhiis tahay
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/les-abonnes-google-one-peuvent-recuperer-un-google-home-mini-gratuitement-325260